180º North East Riini - Dhizaini magazini
Riini "180º Maodzanyemba East" is 90,000 izwi kududzirwa kurondedzera. Iyo inotaura iyo yechokwadi yechokwadi yerwendo rwakaitwa naDaniel Kutcher kuburikidza neAustralia, Asia, Canada neScandinavia mukudonha kwa2009 apo aive nemakore makumi maviri nemasere. ,, mapikicha, mepu, mameseji akajeka uye vhidhiyo inobatsira kunyudza muverengi mune iyo vhezheni uye kupa pfungwa iri nani yezvezviitiko zvemunyori.
Zita rechirongwa : 180º North East, Vagadziri zita : Daniel Kutcher, Izita remutengi : Daniel Kutcher.
Dhinda uye rakabudiswa dhizaini dhizaini
Riini Daniel Kutcher 180º North East